Ku dhawaad ​​xafiisyada oo dhan isticmaalaan kombiyuutarada iyo waa sidaas daraaddeed talinayaa in la isticmaalo habka ogolaaday inuu ka soo kabsado information.There tirtiray waa shan siyaabo sare ee aad dib u soo ceshano xogta lumay ka wadid aad u adag hoos ku qoran. Oo dhan waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaare u gaar ah oo ay. Fadlan ka dooro mid ugu fiican naftaada.
Photo Rec waa mid ka mid ah software ku kalsoon tahay in loo isticmaalo xogta soo kabashada.
• Waxay si fiican u soo kabashada drive adag iyo tan ay tahay in uu ordo hoos noocyada kala duwan ee nidaamyada hawlgalka waa dookh fiican u yahay wax kaqabashada ay taswiiro la tirtiro, sawirada iyo noocyo kale dukumentiyada lagu kaydiyaa drive adag.
• Nidaamka hadda jira file waa in ahan software waxa loo qorsheeyay in ay Marayaan nidaamka si ay u soo celiyaan dhamaan xogta loo tirtiray xaydhoodii, exFAT, HFS + iyo labo ka mid ah hababka kale file.
Recuva waa software kabashada drive adag kale
• Waxaa laga heli karaa lacag la'aan ah oo si toos ah lagala soo bixi karaa Internetka.
• bixinta Tani ma sameeyo mana ay wax ka yar wax ku ool ah, sababtoo ah waxaa uu awood u leeyahay inuu ka soo kabsado noocyada kala duwan ee files laga badiyay ka kombiyuutarada Windows oo sabab u ah weerar virus, awood hirka ama tirtirka shil ah.
• awoodda kabashada Its kuma koobna oo kaliya kombiyuutarada waxa ay sidoo kale waa mid waxtar leh in kaararka camera digital oo lagu daray waxa ay sidoo kale dib u soo celin kartaa MP3 badiyay files. Hel version oo lacag la'aan ah oo aan arko sida ugu wanaagsan ee ay u shaqayso
Waxaa jira ee isticmaala sintaan Haweejkiinna ee Undelete 360 oo waxay door bidaan in software kale barnaamijkii u soo kabashada xogta drive adag.
• Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala inuu ka soo kabsado xogta la asaasay, in aan la raadsan karaa Recycle Bin.
• Nooc kasta oo xogta tirtiray ee geedi socodka aad ah la wareeg shaqada iyo tirtirto furayaasha, gooyay iyo Jinka idinku amrayo oo dhan waa la soo kabsaday karaan
• In ay tahay meel ka mid ah takhasuska kuma koobna drives adag oo keliya laakiin fidiyaa in kaamirooyinka digital, Flash drives USB iyo qalabka kale ee lagu kaydiyo dibadda loo isticmaalo kombiyuutarada iyo qaab kasta oo kale oo ah qalab warbaahinta.
4 Ladnaansho My Files
Kabsado My Files software waa mid waxtar leh marka uu qofku si qalad ah ay yeerto on amarka delete markii nadiifinta sanduuqa boostada iyo in habka mail muhiim ah ayaa la tirtiray. The mails tirtiray laga heli karaa gargaarka ee software-kabashada flash drive in laga heli karaa meel kasta oo la isticmaalayo internet-ka.
• Wuxu u adeegaa hawlaha kale ee la xiriira oo ay ku jiraan dib u soo kabashada ee photos tirtiray, music iyo file kasta oo kale.
• Isticmaalka version Download ee user ah ku eegaan karo files ugu horreeya oo dhan si sahal loogu aqoonsado iyo dib u soo celinta ee faylasha loo baahan yahay oo keliya.
• Intaa waxaa dheer in waxyaabahan sidoo kale waa fududahay in la isticmaalo iyo waxay u baahan tahay heerarka hooseeya ee xirfadaha ee howlgalka of software.
Liiska waa dhamaystirnayn oo aan sheegin ee Wondershare Data Recovery software. Waxay khusaysaa afar hab oo kala duwan si loo hubiyo in dib u soo kabashada oo dhan xogta tirtiray waa baxey ka telefoonada gacanta, MP3 / MP4 iyo kamaradaha digital ka mid ah qalabka kale ee multimedia.
• Uu leeyahay awoodda ka qabashada in ka badan 400 oo noocyada kala duwan ee qaabab file ka jirta computer drives adag iyo qalab kale oo lagu kaydiyo oo casri ah.
• Tani waa mid ka mid ah software ka soo kabashada disk in ciyaar saaxiibtinimo la eego qiimaha iyo waxtarka iyo weliba.
• Waxay bixisaa adeeg soo kabasho khatar la'aan drive adag in yaraynaysaa in magdhow lagu sheegay warbixin ka soo kabsaday.
• Its Akhri feature uun doorasho fiican ee soo kabashada drive adag dibadda ka dhigaa.
Waxaa jira tiro badan oo ah drive adag software kabashada xogta suuqa, laakiin waxaa jira kuwa yar in loo tijaabiyey kuna xaqiijiyay in la siiyo natiijada la filayo in ay user yihiin. Baro software soo kabashada heli karaa disk adag oo awood aad ka bogsato oo dhan xogta la tirtiro, waayo, waxaad u leedahay in soo kabashada disk ah macnaheedu waa in aad ku tashan karaan.